Ny vahaolana farany fitantanana mpiasa
Omeo fidirana amin'ny fotoana tena izy ireo mpikambana ao amin'ny ambaratonga fahazoan-dàlana isan-karazany, handefasa ny asa ary hitsitsy fotoana.
Raha vantany vao mandalo fananana maromaro ianao ho mpiara-miasa dia tsy maintsy mampiasa mpiasa vitsivitsy ianao hanampy amin'ny fampandehanan-draharaha isan'andro. Ny ambaratonga ho an'ity dia ambany noho ny fieritreretan'ny olona maro. Ankoatr'izay, na dia vao manomboka aza ianao dia azonao atao ny manapa-kevitra ny hamoaka ny sasany amin'ireo asan'ny admin hatrany am-piandohana mba hanomezana fotoana malalaka hiasana amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Ho an'ireo orinasam-pitantanana fananan-tany mihodina trano an'arivony sy an'arivony na trano fialantsasatra, dia takiana amin'ny fitantanana ny mpiasa any an-tsaha toy ny mpikarakara tokantrano na ireo vahiny mivory rehefa tonga izy ireo. Antso an-telefaona tsy misy farany, WhatsApp resaka sy aretin'andoha be dia be angamba no ilaina, ary ny valiny dia mety mbola tsy mahafa-po.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou's Staff Management?
Zeevou dia mamela anao hanome fotoana fidirana amin'ny mpiasa rehetra ao aminao. Na mpiasa birao izy ireo, mpikarakara tokantrano na maso-maso maso, azonao atao ny manendry andraikitra iray na maromaro amin'ny mombamomba azy arakaraka ny andraikiny. Io dia ahafahanao mizara ny fampahalalana ilain'izy ireo, nefa tsy manome fampahalalana tsy ilaina izay mety tsy tianao hizara amin'izy ireo na izay mety ho faran'izay lehibe.
Ankoatr'izay, ny fidiran'ny mpiasa dia afaka ferana fananana. Midika izany fa rehefa mizara asa ho an'ireo mpiasa ireo ianao dia tsy ho very hevitra amin'ny fahitana fihenam-bidy lava miaraka amin'ireo mpiasa rehetra miasa ho an'ny orinasanao, fa ireo mifandraika amin'izany ihany no azo omena azy io.
Ireo mpampiasa rehetra nampidirina tao amin'i Zeevou dia afaka miditra amin'ny kalandrie sy ny asany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mailaka mamaly anay, midika izany fa azo tapaka tanteraka ny fifandraisana anatiny. Zeevou ny Change History Ny fampiasa dia ahafahanao manara-maso ihany koa ny fanovana ataon'ny mpiasa isan-karazany amin'ny famandrihana na lisitra iray, mba hahafantaranao foana hoe iza no hanaraka raha mila fampahalalana fanampiny momba ny fanovana ianao.
Zeevou dia mamela anao ihany koa hanaraka ny fisian'ny mpiasa, ary ny mpikarakara trano dia afaka mangataka ravina amin'ny alalàn'izy ireo finday fampiharana, izay azonao ekena na holavinao avy eo.